About Us | Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Dugsiga Oakleigh & Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore waxay u adeegtaa carruurta da'doodu tahay 2 - 11 oo leh dhibaatooyin waxbarasho oo daran iyo baahiyo adag. Dadweynaha waxaa ka mid ah carruurta baahida dheeraadka ah leh, sida muuqaalka jirka ama dareenka, iyo qaar ka mid ah carruurta ku jirta Xayiraadda Autism-ka.
Carruurta yimaada Dugsiga Oakleigh waxay leeyihiin Qorsho Waxbarasho, Caafimaad iyo Qorshe oo Degmadu ay magacawday dugsigayaga. Si aad u sameysato booqasho, fadlan wac xafiiska dugsiga 0208 3685336, doorasho 0. Fadlan arag annaga Siyaasadda Ogolaanshaha.
Ogolaanshada Acorn fadlan arag annaga Sanadaha Hore qaybta
Dugsiga Oakleigh wuxuu siiyaa carruurta haysta dhibaatooyin waxbarasho oo daran. Fasallada waxaa lagu abaabulaa marxaladaha muhiimka ah (xaaladaha gaarka ah ee taa bedeli kara) iyo carruurta ayaa loo qaybiyaa si ay u bixiyaan xeelado macalimiin oo wanaagsan si ay u daboolaan baahidooda.
Oakleigh waxay leedahay koox shaqaale oo ka kooban macalimiin xirfad leh oo macallimiin ah, barashada kalkaaliyayaasha taageerayaasha, kormeerayaasha cunnada, maamulaha goobta, shaqaalaha maamulka iyo taageerada ICT kuwaas oo ay buuxaan taageerayaal kala duwan oo xirfadleyaal ah (eeg Kalkaaliyeyaasha iyo Caafimaadka, Kooxda Taageerada Qoyska). Kooxda isku dhafan ee kala duwan waxay wada shaqeeyaan si loo hubiyo in natiijooyinka ugu wanaagsani ay gaareen dhammaan caruurteena.
Oakleigh Chart Organization Organization (Dokumentiyada PDF)
Xarunta Hawlgalaha Hore ee Xarunta Dhaq-dhaqaaqa Bilowga (Dokumentiyada PDF)
Carruurtu waxay booqan karaan iskuulada maxaliga ah ee ay taageereen shaqaalaha Oakleigh waxaanan sidoo kale soo dhaweynaynaa iskuullada asaasiga ah ee dugsiga si loogu helo fursado ku-meel-gaar ah oo bulshada dhexdeeda ah.